Bayern Munich Oo Isha Ku Haysa Paulo Dybala & Warkaas Oo Farxad Galinaya Real Madrid & Chelsea – Kooxda.com
Home 2018 May Jarmalka, Wararka Maanta Bayern Munich Oo Isha Ku Haysa Paulo Dybala & Warkaas Oo Farxad Galinaya Real Madrid & Chelsea
Bayern Munich Oo Isha Ku Haysa Paulo Dybala & Warkaas Oo Farxad Galinaya Real Madrid & Chelsea
May 3, 2018 · by	Abdi Weli Aadan · 0
Wararka ka imaanaya Jarmalka ayaa sheegaya in Bayern Munich ay udhaqaaqday saxiixa Paulo Dybala si ay ugu badasho Robert Lewandowski.
Dybala oo 24 jir ah ayaa Juventus kaga soo biiray Palermo xagaagii 2015, waxaana uu noqday mid ka mid ah ciyaartoyda ugu fiican adduunka tan iyo markaas. Xilli ciyaareedkan ayuu xidigu 30 kulan u ciyaaray kooxdiisa waxan uu ku bilowday 23 ka mid ah isaga oo dhaliyay 21 gool shan kalena caawiye ka noqday.
Warar ka imaanaya BILD ayaa sheegaya in Bayern ay indhaha ku hayaan Dybala iyadoo Robert Lewandowski uu u muuqdo inuu qarka u saaran yahay inuu ka tago kooxda Bavarian xagaaga soo aadan.
Dybala, oo aan gool dhalin afartii kulan ee ugu danbeysay, ayaa kulan la yeeshay tababaraha Atletico Madrid Diego Simeone 20-kii bishii March xilli ay Atletico Madrid doonayso in ay xiddiga ka dhigto badalka Antoine Griezmann.
Inkastoo uu Karl-Heinz Rummenigge isku dayay inuu xalliyo xaaladda Lewandowski, weeraryahanka reer Poland ayaa weli doonaya inuu ka tago kooxda xilli uu xiiso ka helayo kooxaha Real Madrid iyo Chelsea.
Bavarians oo uu tababare u noqon doono Niko Kovac xilli ciyaareedka soo socda ayaa diyaar u ah inay 100 milyan oo euros u soo bandhigto Dybala, kaasoo qiimeyn doona mustaqbalkiisa Old Lady, islamarkaana uu doonayo inuu baxo.
Xasaasi: Maaliyada Antoine Griezmann Ee Koox Barcelona Oo Haatanba La Daabacay